The Girl Next Door (mmsub)
by CHANNEL+ October 22, 2020
The Girl Next Door ) မွနျမာစာတနျးထိုး
ဆျောအလနျးလေးနှဈယောကျနဲ့ တနျဆာဆငျထားတဲ့ ကိုးရီးယား 18+ မက 21+ မကြ ဇာတျကားလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ...စာဖိုငျက Generate ဖိုငျဆိုတော့ သိပျမမှနျပါဘူး အတကျနိုငျဆုံးကွိုးစားပွီးတော့ ဆီလြှျောသငျ့တျောအောငျပွနျဆိုထားပေးပါတယျ။
မငျးသမီးရဲ့ ပုံစံလေးက ဂပျြစီ ဆနျပွီး စှာတာတာလေးနဲ့ အသညျးယားစရာလေးပါ။ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကလဲ လနျးလှပွီး ရုပျရညျကလညျး ဆှဲဆောငျမှု့ရှိသူလေးပါ...
ဘယျသူမှမငွငျးရကျနိုငျတဲ့ ဆိုဒျဂိုဏျလေးပေါ့ဗြာ။ ယှနျးဆနျအယျ တဈယောကျ အလုပျအကိုငျ မယျမယျရရမရှိပဲ အိမျမှာနရေငျး အပွာဝထ်ထုတှရေေးပွီး စိတျကူးယဉျနပေါတယျ... ကွာလာတော့အိမျမှာ မသငျ့တျောတဲ့အဆုံး သူမ အိမျကထှကျကာ မွို့ထဲမှာ အိမျငှားပွီးနပေါတော့တယျ။ သူမရဲ့ရညျရှယျခကျြက အပွာဝထ်ထုရေး ဘလော့ထောငျပွီး အှနျလိုငျးမှာပဲ ပိုကျဆံရှာဖို့ပါပဲ။
တဈနသေူ့မ နနေဲ့အခနျးဘေးက အသံတှကွေားလို့ နားစှံ့မိရာက ဟိုဘကျယောကြာင်ျးလေးအခနျးက သူ့ကောငျမလေးနဲ့ မဖှယျမရာလုပျနတေဲ့ အသံတှဖွေဈနပေါတယျ။ သူမ အဲဒီအသံတှကွေောငျ့ တဈညလုံးအိပျမရခဲ့ပါဘူး။ သူမမနနေိုငျတဲ့အဆုံး အဲဒီအခနျးဘကျကို သတိပေးစာကပျပါတော့တယျ။
နောကျတဈနမှေ့ာတော့ သူ့အခနျးတံခါးရှေ့မှာ သူတို့တှဆေုံ့ကွပွီး မွငျမွငျခငျြးမှာပဲ ယှနျးဆယျက ရငျခုနျမိသှားပွီးစိတျကူးယဉျအပွာဝထ်ထုတှေ ရေးပွီး အာသာဖွပေါတော့တယျ..။ တဈနေ့ ကောငျလေးက သူ့ကို မုနျးဝယျကြှေးတာနဲ့ပကျသကျပွီး အခနျးထဲလာခဲ့ဖို့ဖိတျလိုကျပါတယျ..။ သူရေးထားတဲ့ စိတျကူးယဉျ ဝထ်ထုကွီးကလဲ ဖှငျ့ရကျသားကွီးဖွဈနပေါတယျ….
ဒါကို ကောငျလေးက စပျစုပွီးဖတျမိသှားရော….ဆကျဖွဈလာမှာတှကေို တှေးမကွညျ့ပဲ ပွေးသာကွညျ့ကွပါတော့ဗြာ.. ဆငျဆာတှေ သိပျမဖွတျထားတဲ့အပွငျ အပွောအဆို တှကေ ညဈညမျးလှတာကွောငျ့မိသားစုနဲ့ကွညျ့ဖို့မသငျ့တျောပါကွောငျ့ သတိခပျြပါရစေ။
The Girl Next Door ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဆော်အလန်းလေးနှစ်ယောက်နဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ကိုးရီးယား 18+ မက 21+ မကျ ဇာတ်ကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...စာဖိုင်က Generate ဖိုင်ဆိုတော့ သိပ်မမှန်ပါဘူး အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ ဆီလျှော်သင့်တော်အောင်ပြန်ဆိုထားပေးပါတယ်။
မင်းသမီးရဲ့ ပုံစံလေးက ဂျပ်စီ ဆန်ပြီး စွာတာတာလေးနဲ့ အသည်းယားစရာလေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကလဲ လန်းလှပြီး ရုပ်ရည်ကလည်း ဆွဲဆောင်မှု့ရှိသူလေးပါ...
ဘယ်သူမှမငြင်းရက်နိုင်တဲ့ ဆိုဒ်ဂိုဏ်လေးပေါ့ဗျာ။ ယွန်းဆန်အယ် တစ်ယောက် အလုပ်အကိုင် မယ်မယ်ရရမရှိပဲ အိမ်မှာနေရင်း အပြာဝထ္ထုတွေရေးပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေပါတယ်... ကြာလာတော့အိမ်မှာ မသင့်တော်တဲ့အဆုံး သူမ အိမ်ကထွက်ကာ မြို့ထဲမှာ အိမ်ငှားပြီးနေပါတော့တယ်။ သူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အပြာဝထ္ထုရေး ဘလော့ထောင်ပြီး အွန်လိုင်းမှာပဲ ပိုက်ဆံရှာဖို့ပါပဲ။
တစ်နေ့သူမ နေနဲ့အခန်းဘေးက အသံတွေကြားလို့ နားစွံ့မိရာက ဟိုဘက်ယောကျာင်္းလေးအခန်းက သူ့ကောင်မလေးနဲ့ မဖွယ်မရာလုပ်နေတဲ့ အသံတွေဖြစ်နေပါတယ်။ သူမ အဲဒီအသံတွေကြောင့် တစ်ညလုံးအိပ်မရခဲ့ပါဘူး။ သူမမနေနိုင်တဲ့အဆုံး အဲဒီအခန်းဘက်ကို သတိပေးစာကပ်ပါတော့တယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ သူ့အခန်းတံခါးရှေ့မှာ သူတို့တွေ့ဆုံကြပြီး မြင်မြင်ချင်းမှာပဲ ယွန်းဆယ်က ရင်ခုန်မိသွားပြီးစိတ်ကူးယဉ်အပြာဝထ္ထုတွေ ရေးပြီး အာသာဖြေပါတော့တယ်..။ တစ်နေ့ ကောင်လေးက သူ့ကို မုန်းဝယ်ကျွေးတာနဲ့ပက်သက်ပြီး အခန်းထဲလာခဲ့ဖို့ဖိတ်လိုက်ပါတယ်..။ သူရေးထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဝထ္ထုကြီးကလဲ ဖွင့်ရက်သားကြီးဖြစ်နေပါတယ်….
ဒါကို ကောင်လေးက စပ်စုပြီးဖတ်မိသွားရော….ဆက်ဖြစ်လာမှာတွေကို တွေးမကြည့်ပဲ ပြေးသာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ.. ဆင်ဆာတွေ သိပ်မဖြတ်ထားတဲ့အပြင် အပြောအဆို တွေက ညစ်ညမ်းလှတာကြောင့်မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါကြောင့် သတိချပ်ပါရစေ။
Link - https://mkvlinks.xyz/Frgbgvc